Chelsea Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhaqaaqday Soo Xerogelinta Frank Lamprd Xilli Ay Juve Kala Heshiiyeen Arinta Sarri - Gool24.Net
Chelsea Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhaqaaqday Soo Xerogelinta Frank Lamprd Xilli Ay Juve Kala Heshiiyeen Arinta Sarri
Chelsea iyo Juventus ayaa ka heshiiyay in Maurizio Sarri uu u wareego Turin laakiin heshiiskaas laguma dhawaaqi doono ilaa Blues ay ka hesho bedelkiisa, iyagoo rajeynaya inay heshiis la gaaraan Frank Lampard, sida ay sheegtay Sky Italia.
Sarri, oo ku hogaamiyay Chelsea kaalinta seddexaad ee Premier League iyo guusha Europa League ayaa ku laabanaya Talyaaniga ka dib hal xilli ciyaareed uu joogay dalka Ingariiska.
Tababarayaal kale ayaa lala xiriiriyay shaqada kooxda Chelsea laakiin waxaa la fahamsan yahay in Lampard uu haatan yahay dooqa koowaad ee Chelsea ee bedelka Sarri.
Sky Sports News ayaa ogaatay in Derby ayaa isku diyaarineyso inay xiriir ka hesho Chelsea oo ku saabsan Lamoard, laakiin weli xiriir kama aysan helin.
Max Allegri oo isna loo arkayay inuu yahay bedelka Sarri ayaa ku dhawaaqay Talaadadii inuu muddi sannad ah fasax ka qaadanayo kubada cagta ka dib markii uu ka tagay Juventus.
Lampard ayaa wacdarro dhigay xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay ee uu tababare ahaa, isagoo kooxda Derby ku hogaamiyay play-offkii loogu soo bixi kahaa Premier League balse ay kooxdiisa guuldarro ka soo gaartay Aston Villa.
Chelsea ayaa wajaheysa suurtogalnimada in xayiraad laga saaro suuqa kala iibsiga laakiin waxa ay magacaabi doonaan labo nin oo si fiican u fahamsan kooxda hadii ay shaqaaleysiiyaan Lampard iyo caawiyihiisa Jody Morris.
Lampard ayaa 13 sannadood ku qaatay galbeedka London, isagoo la qaaday seddex Premier League, afar FA Cup, labo League Cup, Europa League iyo Champions League, wuxuu noqday xiddigii abid ugu goolasha badnaa kooxda.
Morris, oo waayihiisa ka bioaabay Chelsea ayaa wacdarro dhigay markii uu ahaa tababaraha juunyeerka Chelsea ka hor inta uusan Lampard u raacin Derby.